I-China i-Automatic Door Spray Washer yomvelisi kunye noMthengisi | Shinva
■ uyilo lwegumbi elihle kunye nenkqubo
Igumbi eline-conical e-SUS316L liyolulwa libumba ngaxeshanye ngaphandle kwekona elifileyo kunye nokudityaniswa kwendibaniselwano, okungcono ekufunxeni kakuhle nasekugcineni amanzi.
■ Inkqubo yolawulo olukrelekrele
Amacala aphindwe kabini emacaleni okuhambisa ngokuthe nkqo, alawulwa kukuchukumisa isikrini, esiluncedo kunye nokhuseleko. Inkqubo yokujikeleza ikrelekrele elawulwa yi-PLC, akukho sidingo solawulo lwabasebenzi. Onke amaqondo obushushu, uxinzelelo, ixesha, inkqubo, i-alamu ingaboniswa kwiscreen sokuchukumisa kwaye irekhodwe ngabaprinta abakhelweyo.
■ Iindidi zeenkqubo
Iinkqubo ezili-11 ezicwangciswe kwangaphambili kunye neenkqubo ezingama-21 ezichazwe ngumsebenzisi ezinokuchazwa ngokweemfuno zomsebenzisi
■ Ukulayisha ngokulula nokukothula
Iinkqubo zemanyuwali okanye ezizenzekelayo zokulayisha kunye nokothula ziyafumaneka. Ukuhlamba i-rack, ukuhambisa i-trolley kunye nokuhambisa inkqubo, kufanelekile kuyilo lwe-ergonomics, kulula ukusebenza kunye nokubekwa.
■ Ukonga umbane
Igumbi lokuhlamba elinendawo entle yokugcina amanzi; Iitanki zamanzi ngaphambi kobushushu kunye nenkqubo ekhethekileyo yokunyuka kunye nokufudumeza kwenkqubo kunye nolwakhiwo lombhobho lwenza ukuba longe i-30% yamanzi kunye nokusetyenziswa kwamandla kunangaphambili.
■ Ukusebenza ngokukhawuleza nangokukhawuleza
I-Rapid-A-520 yenye ye-washer-disinfector ekhawulezayo kwihlabathi, ethi ixesha eliqhelekileyo lokujikeleza lincitshiswe libe ngama-28mins kubandakanya ukuhlamba kwangaphambili, ukuhlamba, ukuphakama kokuqala, ukunyuka kwe-2, ukubulala iintsholongwane kunye nokomisa. Okwangoku inokuqhubekeka iitreyi ezili-15 ze-DIN kumjikelo ngamnye.
Inkqubo yokufudumeza amanzi yanciphisa ixesha lokulungiselela, akukho xesha lokulinda ngexesha lomjikelo wokubaleka.
Egqithileyo Oluzenzekelayo Flexible Endoscope yomsuki weentsholongwane
Okulandelayo: Amandla aMandla oPhezulu oMbane oMbane oNcedisayo
Ikhasethi yeHydrogen peroxide
Itape yesalathi yeStam-Free Sterilization Tape
I-arhente yokucoca i-Multienzyme engathath'icala ...
Iitreyi ezizenzekelayo ze-Ultrasonic Washers
Itreyini yeleli (imiqolo emibini)
Ifestile yokudlulisa engena emnyango kabini (iyunithi enye)